जीवनशैली – List Khabar
मृ’गौलामा पत्थरी हुँदा खाँदै नखानुहो’स् यी खानेकुरा, खाएमा हुनसक्छ मृ’र्गौला ड्या’मेज
4 days ago जीवनशैली 0
मृगौलाको पत्थरी हिजो आज नेपालमा हर कोहिमा हुने गरेको पाइन्छ। मृगौलाको पत्थरी हुँदा ढाड दुख्ने, बमिट आउन खोज्ने, बारम्बार पिसाब लाग्ने, पिसाब गर्दा पोल्ने वा दुख्ने, पानी कम पिएको बेला अत्याधिक पेट दुखेको महशुस हुने । तर कहाँ दुख्दै छ, भन्ने ठम्याउन नसकिने गरि दुख्ने, कम्मर वा कम्मरको तल्लो भाग …
ब्लड प्रेसर लो छ ? भए अपनाइहाल्नुहोस् ५ उपाय
5 days ago जीवनशैली 0
शरीर स्वस्थ राख्न मुटु स्वस्थ हुनु जरुरी हुन्छ । तर, आजकाल अनियमित खानपान र अस्वस्थ दिनचर्याका कारण उच्च वा न्युन रक्तचापको समस्या दिनहुँ बढ्दो छ । शरीरमा रक्तप्रवाह सामान्यभन्दा कम हुन्छ भने त्यसलाई न्युन रक्तचाप भनिन्छ । सामान्यतः ब्लडप्रेसर १२०÷८० हुन्छ । ९० भन्दा कम हुनुलाई लो ब्लडप्रेसर भनिन्छ । …
6 days ago जीवनशैली 0
नेपालीलाई विश्वभर ‘वीर गोर्खाली’ भनेर चिनिन्छ । विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन गोर्खा सैनिकहरुको पनि ठूलो हात छ । गोर्खा सैनिककै कारण नेपालले फेरि अर्को रेकर्डमार्फत आफूलाई विश्वभर चिनाउने सौभाग्य पाएको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिककी छोरी बेलायती सेनाको एक उच्च पदमा पुगेकी छन् । कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–२२ भुम्दीकी २७ वर्षीय …
‘वर्षमा सय रुपैयाँ खर्च गरे मिर्गौलाको समस्याबाट बच्न सकिन्छ’
1 week ago जीवनशैली 0
हाँडीगाउँका सन्दिप जोशीले आफ्ना बुबालाई मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजानु भयो । अस्पतालमा सुरुमा उहाँले आफ्नै खर्चमा बुबाको मिर्गौलाको डायलासिस गर्नुभयो ।एकदुई पटक आफ्नै खर्चमा उपचार गरेपछि मात्रै उहाँलाई थाहा भयो कि मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क हुन्छ भन्ने । त्यसपछि उहाँले आफ्नो वडाबाट कागजात बनाई मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क गराउनुभयो । जोशीलाई …
काठमाडौँ । मौसम परिवर्तनपछि सबैभन्दा धेरै असर छालामा पर्ने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई खुट्टालाई गोरो र चम्किलो बनाउने केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । तपाईले आफ्नो खुट्टालाई आफ्नो घरमै सुन्दर र आकर्षक बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले कागतीको रसलाई मनतातो पानीमा राखेर त्यसलाई ठूलो भाँडोमा खनाउनुहोस्। त्यसपछि उक्त पानीमा तपाईले आफ्नो खुट्टालाई …
माया भनेको त यस्तो होस , वैवाहिक एनिर्भसरीमा श्रीमानले मृगौला नै उपहार दिए..
एजेन्सी । श्रीमानले श्रीमतीलाई विवाह एनिभर्सरीमा सामान्यतया लुगा, गरगहना इत्यादी उपहार दिने गर्दछन् । कसैले महंगा महंगा सामानहरु पनि दिन्छन् । तर अमेरिकामा एक श्रीमानले भने आफ्नो श्रीमतीलाई अंग नै उपहार दिएका छन् । आफ्नो २३ औं एनिभर्सरीमा आफ्नो अंग नै उपहार दिएका हुन् । ति श्रीमानले मेमोरियल रिजनल हस्पिटलमा …
एसएलसीमा जिल्ला टप गरेर डाक्टर बन्न काठमाडौं आएका प्रमोद खरेल यसरी बने चर्चित गायक
2 weeks ago जीवनशैली 0
प्रमोद खरेल सायद यो नाम ससुन्ने कमै होलान् । साना-साना देखि वृद्धहरुले पनि उनको नाम सुनेकै छन् । प्रमोद खरेल नेपाली संगीत क्षेत्रका जल्दाबल्दा गायक हुन् । उनले एकपछि अर्को हिट गीत दिँदै आएका छन् । अहिले उनी भ्वाईस अफ नेपालको जज पनि छन् । भ्वाइसको तिनै सिजनमा जज बसेका …
पहिलो पटक यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को घोर्ले छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो, भिडियो सहित, प्रखर वक्ता पब्लिक स्पिकिङ बिजेता एबम दोहोरी गाएक रमेश प्रसाईं र उनकी श्रीमती समाजसेवी नन्दा सिंहको बिषयलाइ लिएर यतिबेला विभिन्न समाचार हरु आइरहेका छ्न। कतिपय संचारमाध्यामले रमेश प्रसाईं र नन्दा सिंहले जन्मदिए …
पुरुषभन्दा राम्रो काम गर्छन् महिला मिस्त्री सम्मान स्वरुप सेयर गरौ !
पोखरा – कामको खोजीमा धेरै नेपाली दिदीबहिनी विदेश गएका छन्। राम्रो काम पाइने प्रलोभनमा परेर विदेश गएका धेरै दिदीबहिनीले रोजगारका क्रममा कठिन जिवन बाँच्न बाध्य भएका समाचार आइरहेका छन्। यस्ता समाचार आइरहेपनि कामको खोजीमा नेपाली युवतीहरु विदेश जाने क्रम भने रोकिएको छैन्। यतिबेला कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै युवायुवती …
यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन !
यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन ! हरेक मानिसको भाग्यमा कुनै कुनै माध्यमबाट धन सम्पत्ति कमाउने योग बनिरहेको हुन्छ । योगको आधारमा मानिसले मेहनत गर्छन् र मेहनत अनुसार कसैलाई राम्रो र सजिलो हुन्छ भने कसैलाई क`ष्ट हुन्छ । सजिलो र गा`ह्रो भनेको …